Baro Websaydhada Ugu Fiican Si Aad Ugu Beddelatid Sawirka PDF ▷ ➡️ Kuwa Raaca ▷ ➡️
Soo ogow boggaga ugu fiican si aad ugu beddelatid sawirka PDF
Waxaa laga yaabaa 8, 2019 0 comments 918
Ku darista sawir qaab JPG dukumenti ku jira qaabka PDF way adkaan kartaa. Taasi waa sababta software badan ayaa loo sameeyay U beddelo sawir PDF.
U beddelo sawirrada qaab pdf ah waa mid aad u faa'iido badan Hadaad rabto inaad dukumiinti ahaan ugu daabacdo. Adeegsiga badalku waa habka ugu dhakhsaha badan ee lagu sameeyo hawsha.
Qormada dambe waxaan idin kugu soo bandhigaynaa Codsiyada internetka ee ugu waxtarka badan si loogu beddelo sawirradaada qaab pdf ah.
17 ugu sarreeya ee JPG illaa loo beddelo sawirrada PDF
Marka xigta, waxaan soo bandhigi doonaa boggaga internetka codsiyada internetka ee ugu caansan Si loogu beddelo sawirrada JPG loo beddelo PDF:
Waa degel leh a fududahay oo si fudud loo adeegsado codsi, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah aaladda ugu wanaagsan ee lagu beddelo faylasha. Isaga waxaad ku badali kartaa sawiradaada qaab JPG ilaa PDF, waxa ugu fiican ayaa ah in lagu heli karo in kabadan luqadaha 20.
Sidoo kale, waad isticmaali kartaa aalado kale sida loogu beddelo dukumiintiyada ka socda Word, Excel, Power Point ilaa PDF, ama laga bilaabo PDF qaab qaabkaas ah. Waxay sidoo kale isku ururisaa, qaybisaa, ku biirtaa dukumiintiyada qaab aad u fudud.
Adiga faylasha waa la ilaalin doonaa, maadaama kaliya aad marin u heli karto. Websaydhka waxaa kaydsan oo keliya laba saacadood.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah in ay tahay Waxaa laga heli karaa meelo kala duwan, Android iyo IOS. Waad isticmaali kartaa dukumiinti lagu keydiyey daruurta dhexdeeda oo halkaas mar kale waad ku keydin doontaa.
Software-kaan internetka ah ee loogu talagalay u beddelo sawirrada pdf Waxay saaxiib la tahay qofkasta. Saldhiggeedu wuxuu la jaan qaadayaa nidaamyada hawlgalka ee kala duwan ee Mac, Windows iyo Linux.
Waxay bixisaa adeegyada loogu badalo sawirada qaab JPG ilaa PDF, waxaa dheer soodejinta dukumiintiyada Ereyga, Excel iyo Power power to PDF. Sidoo kale soo bandhig si aad ugu biirto ama kala qaybiso dukumintiga oo aad u cadaadiyo.
Hal-ku-dhiggiisu waa toast isku halaynta, badbaadada iyo fududeynta, iskuday inaad siiso xalal fudud oo xor ah. Isticmaalayaashu uma baahna inay leeyihiin waayo-aragnimo hore si ay u isticmaalaan aaladda.
Aasaaska amnigooda waa taas Faylasha loo rogay si joogto ah ayaa loo tirtirayaa ee adeegaha waqtiga kadib.
Shaki la’aan, waa a software dhameystiran oo dhameystiran, Waxay si buuxda u shaqeysaa iyada oo aan loo eegin meesha aad dunida joogtid.
Freepdfconvert waa madal taasi waxay bixiyaan adeeg bilaash ah, halkaas oo aad ugu beddeli karto sawirradaada qaab JPG ah PDF. Qalabkeeda ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad u beddelatid dukumiintiyada ku jira Word, Excel, power power, office furan, eBooks qaab PDF ah.
Si la mid ah waxaad uga rogi kartaa PDF qaab qaabas ah, Waxay kaloo suurtogal ka dhigaysaa in la isku daro, la qaybiyo oo la beddelo dukumiintiyada.
4.- Khadka tooska ah
Beddelahan internetka ayaa sameyn doona Waxay kuu oggolaaneysaa inaad u beddelato sawirrada qaab JPG ilaa PDF. Madalkiisa waxaa lagu soo bandhigaa Ingiriis, Jarmal, Ruush, Faransiis iyo Isbaanish, adeegyadiisuna waa bilaash.
PWaxay leedahay adeegyo badan oo kala duwan, badalo maqal, muuqaallo, dukumiintiyo qaabab kala duwan ah. Waxay kaloo beddelaysaa e-buugaagta, adeegyada websaydhka, aaladda, hash, iyo kuwo kale.
Bartan ayaa ah mid weyn hagaajin deg deg ah, oo leh JPG-ga khadka tooska ah u beddela sawir PDF. Awood u lahaanshaha u beddelka sawirro qaab kale qaab xor ah oo fudud.
Beddelahan internetka Uma baahna in lagu rakibo kumbuyuutarkaaga, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad hesho xiriir internet oo deggan. Khasab maahan in la isdiiwaangaliyo si loo isticmaalo howlaha.
U beddelo dukumiintiyada ka socda Word, Excel, power point, txt, qaab pdf oo kuu oggolaanaya inaad isku qasdid, iskudarto, kala qeybiso, joojiso oo furto dukumiintiyada pdf. Qalabkaan waxaad waqti badbaadin kartaa, ahaanshaha mid aad u fudud in la isticmaalo.
Iyada oo leh badalka muuqaalkan qadka tooska ah waad awoodaa u beddelo qaabka laga bilaabo JPG una beddelo PDF hab fudud oo fudud. Waxaa lagu heli karaa in kabadan luqadaha 10, sidaa darteed awood u leh inay la xiriirto dad badan oo adduunka ah.
Faa'iidooyinkeeda weyn waxaa ka mid ah in aad awoodid xulo ilaa sawirada 20 hal mar si loogu badalo Si kastaba ha noqotee, kaliya uma adeegayso sawirrada, waxay sidoo kale u beddelaysaa dukumiintiyada qaabab kala duwan.
Sidoo kale, waa muhiim in dhammaan xogta xamuulka ah saacad kadib ayey iskood u tirtiraan. In kasta oo aysan ka mid ahayn aaladaha ugu caansan, haddana aaladoodiisu aad ayaa la isku halleyn karaa.
Websaydhkan ayaa ku siinaya a badalka sawir qaabeedka qaab qaab PDF ah, adeegyadeeda gebi ahaanba waa bilaash oo wax ka qabashadeeda aad bay u fududahay.
Sawirada waxay noqdaan dhakhso iyo sax, madalkan ayaa mas'uul ka ah beddelka kaliya sawirrada. Waxaa ku jira qaababka lagu badalo JPEG, PNG, GIF, BMP, TIF, TIFF, WMF.
Beddelahan internetka ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya wax ka beddel cabirka muuqaalka, iyagoo bixinaya xawaare u gaar ah iyo fududeyn isticmaalka. Aalad weyn oo loogu badalo sawirada, oo aad u faa iido badan isla markaana dabooleysa baahiyaha isticmaaleyaasha.
Gudbi a qaabeynta lamid ah Jpg2pdf madal, sidaa darteed waxay sidoo kale bixisaa in la beddelo qaabka ka JPG loona beddelo PDF. Qaab dhismeedkeeda inkasta oo uusan saaxiibtinnimo aad u wanaagsanayn, waa mid si buuxda u shaqeynaya oo fudud.
Waxa ku jira sidoo kale Waxaad xulan kartaa illaa sawirrada 20 si aad u beddelato. Si kastaba ha noqotee, kaliya uma adeegayso sawirrada, waxay sidoo kale u beddelaysaa dukumiintiyada qaabab kala duwan. Sidaa si la mid ah dokumentiyada xamuulka ah waa la tirtiraa hal saac kadib.
Iyada oo leh badal muuqaalkan si otomaatig ah ayaad u beddeli kartaa sawir kasta qaab kasta oo qaab PDF ah. Uma baahnid inaad gashato barnaamij kasta oo aad ku isticmaasho.
Qalabkan ayaa waliba loo adeegsan karaa gadaal, waxayna kuu oggolaaneysaa inaad tafatirto sawirradaada awood u leh inaad wax beero, wareejiso oo aad saameyn ku yeelato.
Pdfcandy waa aalad kale oo khadka tooska ah loogu beddelo sawirrada qaab PDF ah. Waa beddelaad internetka ah taas waxay siisaa aaladeeda iyada oo aan baajin, gebi ahaanba bilaash ah iyo dhamaan aaladaha ay isticmaali karaan adigoon xayiraad iyo carqalado lahayn.
Asturnaanta feylka ayaa faa iido kale leh, iyo madalkani wuxuu ku siinayaa amniga feylasha la soo diray.
Pdfcandy waa madal taasi waxay sidoo kale beddelaysaa noocyo kale oo qaabab ah, laga soo qaato qaababka Erayada, Excel, docx, odt, dhibic xoog.
Mid kale oo beddelaad ah oo aan ka heli karno internetka, meesha Waad u badali kartaa sawiradaada JPG ilaa PDF. Waxay ku siinaysaa badbaado faylalka aad soo dirtay, kaas oo la tirtiri doono saacadaha 24 gudahooda.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waa weyn waa pWaad ka gedisan kartaa Google Drive, One Drive iyo Dropbox daruur. Faa’iido la’aanteeda kaliya ayaa ah inay leedahay xaddidaado isticmaalka maalinlaha ah iyo cabirka faylalka.
Muuqaalkan beddelayaa waa mid aad u dhameystiran oo sahlan in la isticmaalo interface. Uma baahna qaabeyn kasta si loo isticmaalo.
Waxay bixisaa aaladda loo adeegsado 10, oo aad isticmaali karto iyadoo kuxiran baahiyaha. Faa'iidadeeda weyn waa in loo isticmaali karo dhammaan qaababkab si loogu badalo PDF.
Waxaad awoodi kartaa ku dar feylal badan isla waqti isku mid ah, oo waliba waad ku dari kartaa, kala qaybin kartaa oo isku cadaadin kartaa faylasha PDF.
Sida kuwa kale ee badala sawirka, waxaa loo isticmaali karaa khadka tooska ah, iyada oo aan qaabeyn qaas ah la samayn karin. Waad u badali kartaa sawirrada Qaabka JPG ilaa qaabka PDF, waxay kaloo soo bandhigaan si loogu badalo dukumiintiyada qaabab kale sida Word, Excel, PPT ilaa PDF.
Ka sokow beddelista isugeyn kara, kala qaybin kara isla markaana isku wareejin kara, waxaa lagu isticmaali karaa dhowr luqadood.
Iyada oo leh badalkan internetka ah waad awoodaa Ku sawirro sawirradaada qaab JPG ah una beddelo qaab PDF ah. Waxaa loo isticmaali karaa Windows, Mac, IOS, nidaamyada hawlgalka Linux, iyo kuwo kale.
Sida qaar ka mid ah beddelayaasha kale, sidoo kale badalashada Word, Excel, feylasha farta qaab qaab PDF ah.
Websaydhkan ayaa leh beddel leh a Fudud oo fududahay in la isticmaalo interface. Dhexdeeda waxaad dooran kartaa feylasha sawirrada oo aad u beddelan kartaa PDF adigoon u baahnayn inaad ku rakibto qalab dheeraad ah.
Beddelka internetka waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa u beddelo sawirrada qaabab kale sida png, gif, bmp, tiff. Waxaa lagu gartaa inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu beddelka badan, iyo in si toos ah loo tirtiro faylasha server-yada.
Hipdf waa bedel fudud oo fudud, halkaas oo aad ka beddeli karto sawirradaada gebi ahaanba bilaash. Qalabkani wuxuu waxtar u leeyahay mid kasta oo ka mid ah daalacashada iyo nidaamka hawlgalka Windows, Mac iyo Linux.
Waxa ku jira sidoo kale waad ka beddeli kartaa dukumintigaaga Qaabab kala duwan oo loo yaqaan PDF. Dhamaan faylasha ayaa la tirtiri doonaa hal saac kadib, sidaa darteed amnigaaga ayaa dammaanad leh.
Waa a Codsiga tooska ah ee khadka tooska ah si loogu badalo qaabab muuqaal ah PDF, qaab saaxiibtinimo iyo qaab fudud. Faa'iidadeeda ugu weyni waa in ay ilaaliso tayada sawirrada si habsami leh, iyadoo la ilaalinayo xalka asalka ah.
Codsigan dhexdiisa xogta khadka feylashaada gabi ahaanba waa amaan. Waxay damaanad qaadayaan inuusan cidna marin u lahayn feylasha, maadaama si dhakhso ah loo tirtiro ka dib markii aad bedesho.
Beddelahan ayaa U bandhig si aad isla markiiba u beddesho sawiradaada kala soo dejinta dhowr ilbidhiqsiyo gudahood. Ku hel sawirro ah BPM, EPS, GIF, PNG ilaa qaabka PDF, iyo Nidaamkaaga gabi ahaanba waa mid la isku halleyn karo, ammaan ah oo sahlan in la isticmaalo.
Codsiyadaan internetka ah ayaa ah aad u faa'iido badan oo fudud in la isticmaalo, Waxaan kugu casuumay inaad la kulanto oo aad doorato midka ku habboon baahiyahaaga.
Ayadoo la adeegsanayo codsiyadanu beddelo sawirrada PDF Waxay noqon doontaa khibrad gaar ah.
1 17 ugu sarreeya ee JPG illaa loo beddelo sawirrada PDF
1.4 4.- Khadka tooska ah
1.7 7.- Beddel-sawirkayga
1.9 9.- Beddelidda
1.18 17.- Image.online-beddele
Liiska wargeysyada dhijitaalka ah ee ugu wanaagsan Spain
9 ugu sarreeya: Beddelka Muusikada ugu Fiican ee loogu raaxeysto